Cylind Tin Can, Tin Can Weelka, Birta Ice baaldi, safeexado Box - Baolai
6.3L giraanta nasiib Tin baaldi Waayo Ranjiga, Chemical In ...
Gasacyada 2.5L Tin cunto Fasalka camelli Oil la cuni karo ...
laga beddeli karaa, waxaan siin kaliya ma baakooyinka weelka, ka badan loo hagaajin karo tayada alaabooyinka aad u, ku haboon rinjiga kiimikada, rinjiga, rinjiga baabuurta, saliidda engine, saliid cabbeeyo, daasado khad.
Our faahfaahinta kala duwan soo saarka waa dhamaystiran, iska caabin ugu fiican oo tayo leh, daxalka, waxaan idiin ku yeedhi inuu ku biiro, horumarinta suuqa iyo fikradda cusub.
saliidda cunnada lagu kariyo, daasado oo saliid saytuun ah, isticmaalka waxyaabaha safeexado cunto-fasalka, caafimaad, bii'ada.
tahay wax alla wixii aad raadinayso si ay u gaaraan ama la abuuro, kooxda waa on-gacanta ku caawiyo. From elaborately daasado qaabeeya si naqshado gaar ah.
Dongguan Baolai Birta Can Co., Ltd. la aasaasay sanadkii 2012, waxa ka mid ah si fiican u yaqaan saarayaasha weel safeexado baakooyinka ee Shiinaha. waxyaabaha ugu muhiimsan waxay kala yihiin: cuni karo & kiimikada qasac saliid, wareega, square iyo noocyada kale ee gasacadaha, noocyo dhamaystiran iyo caddaymaha. Our warshad uu leeyahay R xoog & D iyo xoog farsamada, qalabka sare, waxay leeyihiin koox ka mid ah shaqaalaha ka tirsan xirfad iyo farsamo. 12 khadadka sare qalabka wax soo saarka ka soo Germany, Japan, Taiwan iyo dalal kale laga keeno, la 150,000㎡ isweydaarsiga iyo awood-soo-saarka maalin kasta in ka badan 100,000 oo kumbiyuutarada.
Tin Cans , Tin Weelka , Gasacyada cuntada , Oil Tin Can , Tin Box , Tin baaldi ,